Disroot: sehatra maimaim-poana, tsy miankina ary azo antoka amin'ny serivisy an-tserasera | Avy amin'ny Linux
Disroot: sehatra maimaim-poana, tsy miankina ary azo antoka amin'ny serivisy an-tserasera
Vao tsy ela akory izay tao amin'ny lahatsoratray teo aloha izay nantsoina GAFAM versus Comunidad del Software Libre: Control o Soberanía manonona ny sasany izahay fampiharana mahasoa de «Comunidad de Software Libre», izay ankoatry ny fahalalahana sy misokatra, dia nanome fiarovana sy tsiambaratelo tsara. Ary anisan'izany ny «Disroot».
«Disroot» es, mitanisa ny tranonkala ofisialiny amin'ny teny espaniola: "Una sehatra manome serivisy an-tserasera, miorina amin'ny fitsipiky ny fahalalahana, ny fiainana manokana, ny federasiona ary ny fanapariaham-pahefana". Noho izany dia milaza ihany koa izy fa tonga: Tsy misy mpanaraka, tsy misy doka, tsy misy profiling, tsy misy fitrandrahana angona!
"Disroot dia tetikasa miorina ao Amsterdam, tantanan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ary miankina amin'ny fanohanan'ny vondrom-piarahamoniny".
«Disroot» dia sehatra an-tserasera noforonina tamin'ny volohany avy amin'ireo Developers tany am-boalohany, mieritreritra ny hahatratra tranokala afaka manolotra azy ireo sy ny hafa, ireo fampiharana ilaina hahazoana izany mifampiresaka, mizara ary mandrindra. Amin'izany fomba izany, ireo fampiharana ireo dia mifanaraka amin'ny fitsipiky ny: Misokatra, itsinjaram-pahefana, Federated ary manaja ny Fahalalahana sy fiainana manokana.
Ary nanomboka izy ireo «Disroot». Mampiorina fitaovana sy fampandehanana ny tetikasa efa misy amin'ny toerana iray, ary avy eo manampy tetik'asa hafa ho anao ao tombontsoa de «Comunidad del Software Libre» ary antoko hafa liana, amin'ny ankapobeny.
«Disroot» dia sehatra iray te hanova ny fomba fifandraisan'ny olona matetika amin'ny tranonkala, izany hoe te hanana izy ary manolotra safidy hafa mahomby sy miasa amin'ny olona, ​​amin'ny lafiny serivisy an-tserasera, indrindra ny fifandraisana, mba hahatratrarany sorohy ny fampiasana nentin-drazana ny rindrambaiko tompona sy mihidy amin'ny Internet. Toy ny, «Disroot» izy io dia iray amin'ireo safidy malalaka misokatra sy etika misy, tena mahaleo tena, mifantoka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka fa tsy amin'ny fitrandrahana azy.
1.1 Fanokafana kaonty
1.1.1 Dingana 1
1.1.2 Dingana 2
1.1.3 Dingana 3
1.1.4 Dingana 4
1.1.5 Dingana 5
Hanokatra kaonty amin'ny «Disroot», Tsotra be ny fizotrany. Ireto ny dingana ilaina hanaovana izany:
Sokafy ny tranokala ofisialy amin'ny espaniola ao amintsika «Navegador web». Mandehana any amin'ny fizarana «Servicios» ary tsindrio izay iray amin'izy ireo. Ohatra, hofidintsika ny safidy voalohany antsoina «Correo». Raha vantany vao misokatra ity fizarana ity na hafa dia niantso ny bokotra «Inscribirse a Disroot».
Rehefa avy manindry ny bokotra «Inscribirse a Disroot», atolotra antsika a«Formulario de Registro» izay tsy maintsy nofenointsika, ary avy eo tsindrio eo amin'ny faran'ny azy, ilay bokotra antsoina «Continuar». Ireto manaraka ireto dia miseho amin'ity endrika ity:
Username: Izay endri-tsoratra kely ihany no azo ampiasaina sy tsy misy habaka, manomboka A ka Z tsy misy ny Ñ, isa ary fe-potoana.
Anarana isehoana: Izay anolorana hevitra anao hampiasa ilay iray ampiasaina amin'ny Username.
Fanontaniana fanamarinana: Sehatra fanamarinana izay fanontaniana iray voasoratra etsy ambany (amin'ny litera mena) dia tsy maintsy valiana, miaraka amin'ny litera 150 farafahakeliny ary tarehimarika 255 farafaharatsiny.
Mailaka fanamarinana: Inona no hampiasaina mandritra ny fizotran'ny fanamarinana ary inona no hamafana rehefa vita ny kaonty.
Tenimiafina vaovao: Izay tsy maintsy foronina manaraka ny takiana mazava voalaza ao amin'ny fisoratana anarana.
Voatsindry indray mandeha ny bokotra«Continuar», Mailaka 2 no ho tonga amin'ny adiresy mailaka voasoratra. Ny iray misy hafatra fisaorana noho ny fisoratana anarana eo amin'ny lampihazo ary ny iray miaraka amin'i a kaody fanamarinana izay tsy maintsy ampidirina ao amin'ny efijery fisoratana anarana manaraka hanohizana ny fizotrany. Ity dingana ity dia mifarana amin'ny efijery manaraka izay ampandrenesina antsika fa nahomby ny kaody, ary niantso ny bokotra «Continuar».
Voatsindry indray mandeha ny bokotra «Continuar», misy varavarankely vaovao miseho miaraka amin'ny«Términos del Servicio», izay tsy maintsy vakintsika sy ekentsika, amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny boaty boaty antsoina hoe ekeko, ary avy eo dia tsindrio ny bokotra nantsoina «Continuar». Amin'ny farany dia hisokatra ny varavarankely vaovao (https://apps.disroot.org/) mampiseho antsika rehetra serivisy (fampiharana) misy an'ny Platform «Disroot».
Ao amin'ny fizarana Teny miafina misy varavarankely vaovao miseho aminay«Inicio de Sesión», izay tokony hampidirantsika ny «Usuario y Contraseña» noforonina mba hiditra ao amin'ny Platform «Disroot». Afaka mandeha mivantana amin'ny serivisy tsirairay koa isika. Raha te hiditra sy hampiasa ny serivisy omena ao dia tsy maintsy miandry fotoana faran'izay betsaka isika 48 ora fiasana na mandra-pahatongan'ilay sehatra amin'ny alàlan'ny mailaka milaza amintsika fa efa afaka mampiasa ireo serivisy an-tserasera izahay.
Ahoana no ahafahantsika mahita, ao anaty, ny lampihazo «Disroot» manana ireto serivisy amin'ny Internet manaraka ireto:
Mailaka: Serivisy mailaka
Cloud (Cloud): Serivisy fitehirizana rahona
Diaspora: Fandraisana amin'ny Network Diaspora Community Network.
Forum: Efitra Forum Community.
Chat (XMPP): Efitrano fifampiresahana eo amin'ny fiaraha-monina.
Etherpad (sakana): Fanovana fiaraha-miasa antontan-taratasy amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tranonkala.
Etercal (Calcs): Fanovana fiaraha-miasa miaraka amin'ireo takelaka amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny Internet.
Privatebin (Bin): Pastebin an-tserasera sy ny birao fifanakalozan-kevitra momba ny ministra sy open source.
Upload: Serivisy fampiantranoana rakitra vetivety hizarana amin'ny alàlan'ny rohy.
SearX: Serivisy fikarohana amin'ny alàlan'ny motera fikarohana SearX Meta
Poll (Poll): Ny drafitra fanendrena sy ny serivisy fandraisana fanapahan-kevitra miorina amin'ny Framadate.
Project Board (Taiga): Fitaovana fitantanana tetikasa.
Tenimiafina: Fizarana fitantanana hanovana na hamerenana ny teny miafina ary hitantanana ny mombamomba ny mpampiasa.
Araka ny hitantsika, «Disroot» dia sehatra an-tserasera tena ilaina, satria mamela antsika hampiasa fampiharana sy serivisy marobe misy lanja lehibe amin'ny fiainana nomerika isan'andro isika, ary malalaka sy azo antoka izy rehetra. Amin'izay fomba ahafahantsika manao fifindra-monina sarobidy sy mandroso «espacios más libres, seguros, privados y confiables», nataon'ntsika manokana «Comunidad del Software Libre».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Disroot: sehatra maimaim-poana, tsy miankina ary azo antoka amin'ny serivisy an-tserasera
Linus Torvalds dia hampiditra dm-clone ho an'ny Linux Kernel branch 5.4